सभामुखमा पूर्व एमालेबाट सुवास नेम्वाङ कि माओवादीका देव गुरुङ ? चर्चा ओनसरी घर्तीदेखि अग्निप्रसाद सापकोटाकोसम्म – ताजा समाचार
सभामुखमा पूर्व एमालेबाट सुवास नेम्वाङ कि माओवादीका देव गुरुङ ? चर्चा ओनसरी घर्तीदेखि अग्निप्रसाद सापकोटाकोसम्म
प्रतिनिधि सभा नेतृत्वविहीन भएपछि सभामुखको दाबेदारीको रुपमा सत्तारुढ नेकपाभित्र विभिन्न नेताहरुको नाम अगाडि सारिएको छ । बला त्कार को आरोप लागेपछि कृष्णबहादुर महराले दिएको राजीनामा स्वीकृति भइसकेको छ । महराले राजीनामा दिएसँगै विभिन्न सांसदहरुको नाम चर्चा चले पनि सत्तारुढ नेकपाभित्र पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीका नेताहरुको फरक फरक दाबेदारी देखिन थालेको छ ।
महरालाई सभामुख बनाउँदा दलीय भागबण्डामा गरिएको थियो । तत्कालीन एमाले र माओवादीले भागबण्डा गरेर सभामुखमा महरा र उपसभामुखमा डा. शिबमाया तुम्बाहाङफेलाई निर्वाचित गराइएको थियो । महरा माओवादीको कोटामा थिए भने तुम्बाहाङफे एमालेको तर्फबाट निर्वाचित भएकी हुन् । अहिले दुवै पार्टी एक भएर नेकपा गठन भएको र यसबीचमा वागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ, पूर्वसहमति र शर्त सभामुख चयनमा लागू नहुने पूर्वएमाले पक्षधर नेताहरुले बताउन थालेका छन् ।
यस कारण तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि पूर्व एमालेबाट सभामुख बनाउने पक्षमा देखिएका छन् । पूर्व एमालेका तर्फबाट सुवास नेम्वाङको नाम अघि सारिएको छ । उनी यसअघि पनि सभामुख भइसकेका छन् । नेम्वाङ कानुनका ज्ञाता पनि हुन् । यस कारण पनि प्रधानमन्त्री ओली नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन पक्षमा छन् ।
तर, नेम्वाङको नाम अस्वीकार गर्दै पूर्वमाओवादी पक्षधरले एकै व्यक्ति दोहोर्‍याउने भन्दा पनि नयाँ अनुहारलाई पालो दिनुपर्ने तर्क गरेका छन् । यद्यपी नेम्वाङको नाम अस्वीकार गरेको पूर्वमाओवादीले ओनसरी घर्तीको नाम सुरुमा अगाडि सारे पनि उनका पति वर्षमान पुन ऊर्जामन्त्री रहेकाले घर्तीलाई नबनाउने पक्षमा पुगेको छ । देव गुरुङको नाम एक नम्बरमा राखेको पूर्व माओवादी पक्षधरमा अग्निप्रसाद सापकोटाको नाम पनि चर्चामा ल्याएको छ ।
सत्तारुढ नेकपाले सभामुख नछाड्ने देखिएपछि उपसभामुख शिबमााया तुम्बाहाङफेको पद धरापमा परेको छ । सभामुख र उपसभामुखमा एकै दलको हुनु नहुने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले नेकपाले सभामुख बनाएमा नेकपाकी तुम्बाहाङफेको उपसभामुख पद धरापमा परेको हो ।